मोदीलाई पत्र लेखेर डा. केसीले किन गरे अनशन स्थगित ?	Postpati – News For All
पोष्टपाटी २०७६ कार्तिक २६,मंगलवार प्रकाशित पढ्न लाग्ने समय : ३ मिनेट
कात्तिक २६, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्र लेखेका छन्।
सीमा विवादका विषयमा देशभर आन्दोलन चर्किरहेका बेला केसीले डडेलधुरामा ९ दिनदेखि जारी अनशन स्थगित गर्दै मोदीलाई पत्र लेखेका हुन्।